Articles tagged 'kumbirai kangai'
Late minister Kangai's estate sued over $400k debt 20 September 2018 HARARE - The late former Cabinet minister Kumbirai Kangai's estate has been dragged to the High Court for failing to settle a $405 000 debt. The former Zanu PF politburo member and former Cabinet minister died on August 24, 2013 According to the High Court, the applicant was SG Musoni Consu...
EASTERN NEWS: Kangai family abandons daughter 6 July 2017 MUTARE - A woman said to be the daughter of the late liberation war stalwart, Kumbirai Kangai, has been living in a rundown rural mental hospital without any visitors for nearly 40 years now, the Eastern News can report. Rukariro Rehabilitation Centre, 72 kilometres west of the eastern city, i...
Court blocks sale of Kangai's farm 2 September 2016 HARARE - A local firm has won a High Court case in which it sought to bar the sale of the late former Zanu PF politburo member Kumbirai Kangai's farm, following a botched $3 million land development deal. According to court papers, the applicant is Divine Aid Trust Company, which trades as Da...
Mugabe roasts Mnangagwa 6 October 2014 HARARE - Justice Minister Emmerson Mnangagwa's embarrassing about-turn at the weekend over the senatorial prospects of former Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) governor Gideon Gono was apparently made at the behest of a miffed President Robert Mugabe, the Daily News has learnt. Highly-placed sour...
Hurdles cleared for Gono's Senate post 7 September 2014 HARARE - Government yesterday removed the last hurdle for retired Reserve Bank of Zimbabwe governor Gideon Gono to replace Kumbirai Kangai as Buhera Senator. The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) officially gave notice of senatorial vacancies in Buhera and Chegutu in a government gazette. ...
Kumbirai Kangai remembered 1 September 2014 HARARE - A high-level team comprising of Zanu PF Manicaland provincial leadership yesterday descended on the late Kumbirai Kangai's Glen Forest Farm in Harare for his memorial service. From chronicling his first interactions with the ex-Cabinet minister at Cold Comfort Farm in 1967 to narratin...
Factionalism stalls Kangai replacement 29 October 2013 HARARE - The race to replace the late Zanu PF Senator Kumbirai Kangai is intensifying, with rival Zanu PF factions angling to submit a candidate to replace the former politburo member. Kangai, who was declared a national hero and buried at the National Heroes Acre in August, secured the seat ...
Mugabe warns hospitals 1 September 2013 HARARE - President Robert Mugabe has warned hospitals against detaining patients who would have failed to settle their medical bills. Mugabe told mourners at the burial of former Cabinet minister and Zanu PF politburo member Kumbirai Kangai, that he was worried with the arm-twisting tactics by...
Deaths dampen Zanu PF 25 August 2013 HARARE - Fresh from his inauguration, President Robert Mugabe has been shattered by the death of three veteran freedom fighters in a week following the death yesterday of Zanu PF politburo member Kumbirai Kangai. Kangai, 75, a former Cabinet minister, died at his Glen Forest home yesterday mor...
Kumbirai Kangai dies 24 August 2013 HARARE - Zanu PF politburo member Kumbirai Kangai has died. Details to follow.